VaMnangagwa Vanoshanyira Glen View Yanetseka neKorera
Gunyana 19, 2018
GLEN VIEW —
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vashanyira musha weGlen View uko kwapararira chirwere chekorera panguya iyo hurumende ichiti iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora achashandiswa mukurwisa nechirwere ichi.
VaMnangagwa vatambirwa nemufaro mukuru nevatsigiri veZanu PF vanga vaungana pachipatara pamwe nevana vechikoro vanga vachibva kuchikoro pavaenda kunoona vanhu vari kurwara nechirwere chekorera mumusha unogara veruzhinji muGlen View.
Vachitaura pazvitoro zveTichagarika zviri mumusha weGlen View mushure mekushanyira chipatara cheGlen View Polyclinic uko kuri kurapwa vanhu vakati kuti vari kurwara nechirwere chekorera, VaMnangagwa vati hurumende yavo ichabatsira kanzuru yeHarare mukutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepombi dzinotakura tsvina pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena kuitira kuti chirwere chekorera chipere muHarare uye chisarambe chichipararira kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare.
VaMnangagwa vakurudzirawo kuti veruzhinji vagare vakashambidzika pose pavari kuti vasatapurirane chirwere ichi.
Meya weguta reHarare, VaHerbert Gomba, avo vanga varipowo pashanywa naVaMnangagwa, vati sekanzuru vari kuedza pose pavanogona napo kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. VaGomba vati pane zvibhorani zviviri zvavatovhrara zviri muGlen View zvange zvave kukonzera kupararira kwechirwere chekorera.
Mugari wekuGlen View, Amai Mascelyn Chibweya, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti kanzuru iri kugadzira pombi idzo dzanga dzave kusanganisa mvura yekunwa pamwe netsvina kana kuti masuweji.
Mumwe mugari wemuGlen View, VaJoe Kadzviti, vati zviuru nezviuru zvevanhu zvingadai zvakafa dai pasina kumhanyidzana kuri kuitwa nevemasangano akazvimirira, vemabhizimusi, kanzuru pamwe nehurumende mukurwisana nechirwere ichi icho chapfunya chisero muHarare.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vaparura homwe yavari kukumbira kuti izadzwe nemari neveruzhinji yakanangana nekurrwisa chirwere chekorera.
VaNcube vati hurumende iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhati emadhora ichashandiswa mukurwisa chirwere chekorera.
Gurukota rezvehutano, VaObediah Moyo, vanoti pane vanhu makumi matatu nevaviri vafa nechirwere chekorera kusvika pari nhasi uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira.
Chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008.